EX - ABSDF: အိုးရွဲ.ကိုစလောင်းရွဲ.ဖြင်.ဖုံးခြင်း သရ၀ဏ်(ပြည်) EX - ABSDF
အိုးရွဲ.ကိုစလောင်းရွဲ.ဖြင်.ဖုံးခြင်း သရ၀ဏ်(ပြည်) Ko Nyi
လောလောဆယ်တွင်မေးခွန်းတစ်ခုခေတ်စားနေ၏ ။ ၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက်မဲပေးရာတွင် ပါတီအမည်ကိုကြည်.၍မဲပေးရွေးချယ်ရမည်လား
၊ ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်လောင်း၏ အရည်အချင်းကိုကြည်.၍ မဲပေးရမည်လားဟူသောမေးခွန်းဖြစ်သည် ။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင် လူကိုကြည်.ရမည်လော ၊ ပါတီကိုကြည်.ရမည်လော ဟူသည်.မေးခွန်ဖြစ်သည် ။ ထိုမေးခွန်းအဖြေမှာ အမျိုးမျိုကွဲပြားသဖြင်. ပြည်သူလူထုမှာမျက်စေ.လည်နေကြရ၏ ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ပါတီမျက်နှာပဲကြည်.ကာ NLD ပါတီကိုမဲပေးဖို. လှည်.လည်ဟောပြောစည်းရုံးနေသည် ။ စာရေးဆရာမ ရွှေကူမေနှင်း (
၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲ NLD အမတ်ဟောင်း ) က ရွေးကောက်ပွဲတွင် လူတော်တွေကိုရရှိရန် လူကိုသာကြည်.၍ရွေးချယ်သင်.ကြောင်း၊ လူညံ.တွေကိုရွေးမိလျှင်လွှတ်တော်ထဲရောက်မှသင်ပြနေရန်အချိန်မရှိကြောင်း ၊ နောင်အခါမှသင်ပြသည်ထက် တော်သောထက်မြက်သောလူများကိုသာ ရွေးချယ်သင်.ကြောင်း ပြောကြားထားသည် ။ ဤတွင်လူကိစ္စနှင်. မူကိစ္စသည် ရှေ.တန်းသို.ရောက်လာ၏ ။ ကျွန်ုပ်ထံသို.လည်း လူနှင်.ပါတီ ဘယ်ဟာကိုကြည်.ရမည်နည်းဟုမြန်မာပြည်တလွှားရောက်လေရာအရပ်တွင်လာရောက်မေးကြကုန်၏
။ အလွယ်ဖြေမည်ဆိုလျှင် လူကောင်းကိုရွေးရမည်ဖြစ်သဖြင်. လူကိုကြည်.၍ရွေးကြပါဟုပြောရမလိုဖြစ်နေသည် ။ ကျွန်တော်သည် အသက်အတော်အတန်ရလာသောအခါ နှလုံးသားထက်ဦးနှောက်ကို ပို၍အသုံးပြုနိုင်လာသည် ။
ဖြစ်ချင်တာထက်ဖြစ်သင်.တာကိုဦးစားပေးတတ်လာသည် ။ ထိုအခါ ပါတီစွဲ ဂိုဏ်းဂဏစွဲထက် လူတော်လူကောင်းဗဟိုပြုသော လူကိုအဓိကထားရွေးမည်.စနစ်မျိုးကိုပို၍အာရုံညွှတ်မိသည် ။ထို.ကြောင်.လာမည်.ရွေးကောက်ပွဲတွင်လူကိုကြည်.၍ရွေးပါဟုဆိုမိတော.မလိုဖြစ်နေသည်
။ သို.သော် မြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်နေသည်မှာ တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင်လက်ခံထားသော စနစ်မျိုးမဟုတ်ပဲ ကမောက်ကမစနစ်မျိုးဖြစ်နေသည်ဖြစ်ရာ ထိုသို.အလွယ်ပြော၍မရ ၊ ပုံသေနည်းတစ်ခုထဲဖြင်.ကြည်.၍မရ ၊ကမ္ဘာကလက်ခံသောစနစ်အတိုင်းလိုက်လုပ်လို.မရ ။
မြန်မာ.စနစ်သည်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေသဖြင်. အိုးရွဲ.ကိုစလောင်းရွဲ.နှင်.ဖုံးပါမှ တော်တည်.မှန်ကန်မည်ဖြစ်သည် ။ ထို.ကြောင်. ယခုရင်ဆိုင်နေရသော မြန်မာ.နိုင်ငံရေးစနစ်ကိုအကျဉ်းချုပ်ကြည်.ကြပါစို. ။ သူများနိုင်ငံတွင် ၀န်ကြီးချုပ်အုပ်ချုပ်သောပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစနစ်( Parliamentary Executive ) နှင်. သမ္မတအုပ်ချုပ်သော သမ္မတနိုင်ငံစနစ်ဟူ၍ ( Presidential Executive ) အုပ်ချုပ်ရေးပုံစံနှစ်မျိုးနှစ်စားရှိသည် ။ ထိုနှစ်မျိုးနှစ်စားသည် သူ.နည်းနှင်.သူလုပ်နည်းလုပ်ဟန်သီးခြားစီရှိသည် ။ ပါလီမန်စနစ်တွင် အနိုင်ရပါတီ၏အကြီးအကဲသည် ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာပြီး သူက အစိုးရအဖွဲ.ကိုခေါင်းဆောင်ဖွဲ.စည်းသည် ( ဥပမာ ဦးနု၏ အစိုးရအဖွဲ. ၊ အင်္ဂလန်နိုင်ငံ၏အစိုးရအဖွဲ. ၊ အိန္ဒိယ အစိုးရ) ။ ထိုနည်းမှာရှင်းသည် ။ အနိုင်ရသူများသောပါတီက အစိုးရဖွဲ.နိုင်သည် ။ ပါတီဥက္ကဌသည် အစိုးရအဖွဲ.ခေါင်းဆောင် (၀န်ကြီးချုပ် ) ဖြစ်မည် ။ နောက်ထပ်စနစ်တစ်ခုမှ သမ္မတစနစ်ဖြစ်သည် ။ ထိုစနစ်တွင် လွှတ်တော်အတွက်ရွေးကောက်ပွဲသည် သမ္မတရွေးချယ်ခြင်းနှင်.မဆိုင် ၊ သမ္မတကိုလူထုက သမ္မတရွေးပွဲကျင်းပပြီးတိုက်ရိုက်မဲပေးရွေးချယ်သည် ( ဥပမာ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု ) ။ ဆိုလိုသည်မှာ ၀န်ကြီးချုပ်စနစ်တွင် လွှတ်တော်က၀န်ကြီးချုပ်ကိုရွေးသည် ။ ၀န်ကြီးချုပ်ကအစိုးရအဖွဲ.ကိုဖွဲ.သည် ။ သမ္မတစနစ်တွင် ပြည်သူလူထုကမဲပေးပြီး သမ္မတကိုတိုက်ရိုက်ရွေးကောက်တင်မြှောက်သည် ။ သမ္မတကအစိုးရဖွဲ.သည် ။၀န်ကြီးများကိုခန်.သည် ။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်သမ္မတ ခန်ရာတွင် ၊ ၀န်ကြီးချုပ်ခန်.ရာတွင်ဤနည်းနှစ်မျိုးကိုပဲ အသုံးများကြသည် ။ မြန်မာနိုင်ငံကတော.ပြောမဆုံးပေါင်တောသုံးတောင်ဆိုသလိုပင် ထိုစနစ်နှစ်ရပ်စလုံးကိုပါယ်သည် ။ ဥာဏ်ကြီးရှင်များ နှစ်ပေါင်းဆယ်စုနှစ်နှင်.ချီကာအချိန်ယူရေးဆဲခဲ.သောညောင်နှစ်ပင်ညီလာခံကြီးမှပေါ
်ထွက်လာသော ၂၀၀၈ ဖွဲ.စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ထူးခြားဆန်းပြားသော မြန်မာ.နည်းမြန်မာ.ဟန် သမ္မတရွေးချယ်တင်မြောက်နည်းစနစ်ကိုတီထွင်လိုက်၏ ။ မြန်မာနိုင်ငံသည် သမ္မတစနစ်လဲမဟုတ် ၊ ၀န်ကြီးချုပ်စနစ်လဲမဟုတ်သောကိုးလို.ကန်းလန်.စနစ်ကိုကျင်.သုံးသည် ။ အနိုင်ရပါတီ၏ ဥက္ကဌက ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်နိုင်သောစနစ်မျိုးလဲမဟုတ် ၊ သမ္မတကိုလူတွေကမဲပေးရွေးချယ်သောစနစ်မျိုးလဲမဟုတ် ။ဟိုမရောက်သည်မရောက်စနစ်မျိုးဖြစ်သည် ။ ကမ္ဘာပေါ်တွင်ဘယ်နိုင်ငံမှာမှမရှိသောသမ္မတရွေးချယ်နည်းဖြင်. ရွေးချယ်တင်မြှောက်ကြသောကြောင်.ဖြစ်သည် ။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွှတ်တော်တွင် သမ္မတရွေးမည်ဆိုသောအခါ သမ္မတလောင်းသုံးဦးကို အရင်ရွေးကြရ၏ ။ရွေးချယ်ပုံမှာ စစ်တပ်က တစ်ယောက် ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကတစ်ယောက် ၊ပြည်သူ.လွှတ်တော်ကတစ်ယောက် ရွေးကြရ၏ ။ အကယ်စင်စစ် လွှတ်တော်တွင် တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း ( ၁၆၆ ဦး) ရွေးကောက်ပွဲမ၀င်ရပဲပါဝင်ခွင်.ရနေပြီးဖြစ်ရာ စစ်တပ်မှ သမ္မတလောင်းရွေးချယ်ခွင်.ဟူ၍ထပ်လုပ်နေစရာမလိုတော.ပေ ။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကတစ်ယောက် ၊ ပြည်သူ.လွှတ်တော်ကတစ်ယောက် (စုစုပေါင်း သမ္မတလောင်းနှစ်ယောက် ) ရွေးထုတ်ကာ ထိုလွှတ်တော်နှစ်ရပ်ပေါင်း (ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က ) သမ္မတတစ်ဦးကိုရွေးချယ်မည်ဆိုလျှင် ရှင်းပါသေး၏ ။ ယခုသော် မရှုပ်မရှင်းဒီမိုကရေစီစနစ်အဖြစ် သမ္မတစနစ်ကိုလည်းကျင်.သုံးသေးသည် ။
သမ္မတကိုလည်းလူထုကတိုက်ရိုက်ရွေး၍မရ ၊ ၀န်ကြီးချုပ်စနစ်လို အနိုင်ရပါတီ၏ခေါင်းဆောင်ကိုအလိုလို ၀န်ကြီးချုပ်ဖြစ်ခွင်.လည်းမရှိ ။ ဟိုလိုလိုဒီလိုလိုကြီးဖြစ်နေသောစနစ်ဖြစ်သည် ။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွှတ်တော်နှစ်ရပ်ထဲရှိရာမှ သမ္မတရွေးသောအခါတွင်မှတပ်မတော်က တစ်ဖွဲ.သပ်သပ်ရွေးခွင်.ပေါ်လာသဖြင်. (တပ်မတောာ်လွှတ်တော်ပါတစ်ခုတိုးကာ ) မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွှတ်တော်သုံးရပ်ပေါ်ပေါက်သလိုလိုဖြစ်နေပါသည် ။ပြည်သူ.လွှတ်တော် ၊အမျိုးသားလွှတ်တော်နင်.တပ်မတော်လွှတ်တော် ဟူ၍ လွှတ်တော်သုံးရပ်ပုံစံဖြစ်နေပါသည် ။ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုပါထည်.တွက်လျှင်မြန်မာနိုင်ငံတွင် လွှတ်တော်လေးရပ်ရှိနေသလိုပုံစံမျိုးဖြစ်နေပါသည် ။
ထိုသမ္မတလောင်းသုံးယောက်ထဲကမှ တစ်ယောက်ကိုရွေးသောအခါတွင်လည်း တပ်မတော်သည် မဲပေးခွင်. ၂၅ ရာခိုင်နှုန်း(၁၆၆ မဲ)ကိုထပ်မံယူထားသဖြင်. ယဇနလက်ဖက်အကြော်စုံလို နှစ်ပြန်ကြော် ၊ နှစ်ထပ်ကွမ်း ဖြစ်နေပါသည် ။ တကယ်တမ်းပြောရလျှင် လွှတ်တော်တွင် တပ်မတော်သားများ ၁၆၆ ဦးရွေးကောက်ပွဲမ၀င်ပဲဝင်ထိုင်နေပြီဖြစ်သဖြင်. မြန်မာနိုင်ငံတ၀ှမ်းရှိတပ်မတ်ာသားများသည် မဲပေးခွင်.ပင်မရသင်.တော.ပါ ။ လူလဲ
ခေါ်လာ ၊ မဲလဲထပ်ပေးစနစ်သည် အကြောနှစ်ကြိမ်ယူသလိုဖြစ်နေပါသည် ။ သမ္မတရွေးရာတွင်လည်း ဒီမိုကရေစီနည်းကျမဟုတ်ပဲ လူတစ်ယောက်ရွေးခွင်.ပေးထားပြီးဖြစ်သဖြင်.မဲပေးရာတွင်ဝင်မပါသင်.တော.ပါ ။ ထိုသို.မဟုတ်ပဲသမ္မတရွေးပွဲ၌မဲပေးရာတွင်ပါချင်လျှင်တပ်မှလူတစ်ယောက်ရွေးချယ်ပေးခွင်.မရှိသင်.တော.ပါ
။ ယခုဖြစ်နေပုံမှာ ဦးပုည၏ရေသည်ပြဇာတ်ထဲကရေသည်ယောက်ကျားလို မြို.ရိုးကြားတွင်ဝှက်ထားသောအသပြာတစ်ပဲကိုလဲလိုချင်သည် ၊ ဘုရင်ကြီးဆုချမည်.
ဆုငွေကိုလည်းလိုချင်သည်ဆိုသောပုံမျိုးဖြစ်နေပါသည် ။ ထိုအကြောနှစ်ကြိမ်ယူထားသောစနစ်ကြောင်. ပြည်သူလူထုသည် စစ်တပ်ကတင်မြောက်သောသမ္မတလောင်းမဟုတ်ပဲ ပြည်သူလိုလားသော ဒီမိုကရေစီ သမ္မတလောင်းစစ်စစ်တစ်ယောက်ကိုတင်မြှောက်ချင်သည်ဆိုလျှင် လွှတ်တော်တွင် ၅၁ ရာခိုင်နှုန်း (အမတ်ဦးရေ တစ်နိုင်ငံလုံးစုစုပေါင်း ၃၃၃ ဦး ရဖို.လိုသည် ) ။
ထို.ကြောင်. ကျွန်တော်တို.သည် စစ်အာဏာရှင်မဟုတ်သော ဒီမိုကရေစီအစိုးရတစ်ရပ်
၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအပြီးတွင်ပေါ်ထွန်းစေချင်သည်ဆိုလျှင် တောင်တောင်အီအီစဉ်းစားမနေပဲ ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သား လွှတ်တော်အမတ် ၃၃၃ ယောက်ကို နေပြည်တော်ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ခန်းမထဲသို.ရောက်အောင်ပို.နိုင်ဖို.လိုသည် ။
တကယ်တမ်းတွင် စွမ်းရည်မြင်.မားလှသောလွှတ်တော် နှင်.စွမ်းရည်မြင်.မားသောအစိုးရ ဟူ၍ နှစ်မျိုးစလုံးရွေးချယ်ခွင်.ရလျှင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သော်လည်း ယခုမြန်မာနိုင်ငံတွင်ဖြစ်နေပုံမှာ ပြည်သူလူထုကရွေးချယ်တင်မြှောက်သောအရပ်သားအစိုးရတက်လာရေးမှာသေရေးရှင်ရေးအရေးကြီးနေသောအချိန်ဖြစ်သည်
။ ထို.ကြောင်.လွှတ်တော်တွင်မဲခွဲသောအခါကိုယ်.ဘက်ကအသာရမှ အရပ်သားအစိုးရဖွဲ.နိုင်မည်ဖြစ်သဖြင်. အရေအတွက်သည်အဓိကကျနေသောအချိန်လည်းဖြစ်သည် ။ နှစ်ပြန်ကြော်အဖွဲ.နှင်.ရင်ဆိုင်ရာတွင် ၃၃၃ ဦးကိုယ်.ဘက်ကမရှိပဲ ဒီမိုကရေစီသမ္မတ မဖြစ်နိုင် ၊ ဒီမိုကရေစီအစိုးရမဖြစ်နိုင် ၊ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမဖြစ်နိုင် ။ထို.ကြောင်. လူဖြစ်စေ ၊ခွေးဖြစ်စေ ၊ကြောင်ဖြစ်စေ ခလုပ်နှိပ်မဲပေးတတ်သူမှန်သမျှကိုပြည်သူ.ဘက်တော်သားပါတီကြီးတစ်ခုမှအမတ်များဆိုလျှင်ပုံအောထောက်
ခံကြဖို.သည် မြန်မာ.နိုင်ငံရေးအနာဂါတ်အတွက် သေရေးရှင်ရေးအရေးကြီးနေခြင်းဖြစ်သည် ။ ထို.ကြောင်. လူကိုမကြည်.ပဲ ပါတီကိုကြည်.၍မဲပေးကြပါဆိုခြင်းသည် ယခုအချိန် (၂၀၁၅ ရွေးကောက်ပွဲအတွက် )မှန်ကန်သောစကားဖြစ်သည် ။ လွှတ်တော်တွင် ပါတီကိုမကြည်.ပဲ လူတော်တွေကိုချည်းကြည်.ကာရွေးချယ်လိုက်လျှင်တောင် ထိုလွှတ်တော်သည် စွမ်းဆောင်ရည်အလွန်မြင်.သောလွှတ်တော်တစ်ရပ် (လောလောဆယ်၌ ) ဖြစ်လာနိုင်ဦးမည်မဟုတ်ချေ ။ အဘယ်.ကြောင်.ဆိုသော် လွှတ်တော်၌ မည်သည်.အရေးပါသောဆုံးဖြတ်ချက်မဆို တပ်မတော်သား ၂၅ ရာခိုင်နှုန်းကမထောက်ခံပဲ
ဆုံးဖြတ်၍မရသောကြောင်.ဖြစ်သည် ။ ဤဖြစ်စဉ်ကို ယခုမကြာသေးမီက ပုဒ်မ ၄၃၆ ပြုပြင်ရေး လွှတ်တော်တွင်းဆန္ဒမဲခွဲကြစဉ်က ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆန္ဒမဲပေးသူရွေးကောက်ခံအမတ်များ၏မဲဆန္ဒအသာစီးရခဲ.သော်လည်း တပ်မတော်သား(၁၆၆ ဦး) များကန်.ကွက်မဲပေးခဲ.ကြသောကြောင်. အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးအဆိုများရှုံးနိမ်.ခဲ.ကြသည်.သာဓကရှိပြီးသားဖြစ်သည် ။ ထိုနမူနာအရ ကျွန်တော်တို.သည် ပါတီကိုမကြည်.ပဲ ဟိုလူသည်လူ စသည်ဖြင်.ကောင်းနိုးရာရာရွေးချယ်၍လွှတ်တော်ထဲသို. ပို.ခဲ.ပြီဆိုကြပါစို. သမ္မတရွေးပွဲမဲပေးရာတွင် တပ်မတော်မှတင်သွင်းလာသောစစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတစ်ဦးကိုထောက်ခံမဲပေးမည်. လူ ၃၃၃ ယောက်စုမိသွားပါက နောက်ထပ်ငါးနှစ်တိတိ အရပ်ဝတ်စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကိုလည်စင်းခံကြရဦးမည်ဖြစ်သည် ။ ထိုသို.မဖြစ်လိုလျှင် အရပ်သားပညာတတ်အစိုးရဖြစ်မြောက်နိုင်သည်ဟုယုံကြည်ယူဆသည်. ပါတီတစ်ခုကိုပုံအောရွေးချယ်ခြင်းဖြင်. လွှတ်တော်တွင် ရွေးကောက်ခံဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားအနည်းဆုံး ၃၃၃ ဦးကိုရွေးချယ်နိုင်ရပေမည်။ ထို ၃၃၃ ဦးက အသင်.တော်ဆုံး ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတစ်ဦးကိုရွေးချယ်လိုက်ခြင်းအားဖြင်. ၁၉၆၂ ခုနှစ်မှစကာ ပထမဆုံးအကြိမ် အရပ်သားအစိုးရ ဖြစ်လာနိုင်ခွင်.ရှိပေသည် ( ကာချုပ်ကတိုက်ရိုက်ခန်.သော ၀န်ကြီးသုံးပါးကိုတော. ချန်ထား၍မရနိုင်သေးပေ) ။ ထိုအရပ်သားအစိုးရသည် အရပ်သားဝန်ကြီးများ ၊ အရပ်သားတရားသူကြီးချုပ် ၊ အရပ်သားရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ဥက္ကဌ ၊ အရပ်သားရှေ.နေချုပ် ၊ အရပ်သား သံအမတ်ကြီးများ ၊ ကိုခန်.အပ်ခွင်.ရှိပြီး တိုင်းပြည်၏ ယိုင်လဲပြိုကျပျက်စီးနေသော တရားရေးမဏ္ဍိုင် ၊စီးပွာရေးမဏ္ဍိုင် ၊ ဥပဒေပြုရေးမဏ္ဍိုင် ၊ အုပ်ချုပ်ရေးမဏ္ဍိုင်များကို ပြင်ဆင်မောင်းနှင်ခွင်.ရပေမည် ။ပညာရေး၊ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနများတွင်မိုးကျရွှေကိုယ်များရောက်လာခြင်းကိုတားဆီးနိုင်ပေလိမ်.မည်
။၀န်ထမ်းများအဂတိလိုက်စားမှုကိုယခုထက်ပိုမိုတိုက်ဖျက်နိုင်ပေလိမ်.မည် ။သေချာသည်ကတော. အရပ်သားပညာတတ်များငါးနှစ်အုပ်ချုပ်ခွင်.ရခဲ.လျှင် ၁၉၆၂ မှ ၂၀၁၅ အထိ(၅၃)နှစ်လုံးလုံး မြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်ခဲ.သော စစ်အစိုးရထက်တော. များစွာသာလွန်ကောင်းမွန်တိုးတက်အောင် ပြုလုပ်နိုင်ပေလိမ်.မည် ။ စစ်တပ်လိုလားသော ဘက်တော်သားများတကြော.တစ်ဖန်ပြန်တက်လာလျှင်တော.ပြည်သူလူထုအများစုကြီး၏ဘ၀မှာဒုံရင်းဒုံရင်းဖြစ်လိမ်.မည်
။အာဏာရှင်လက်ဟောင်းလက်သစ်များ ၊ ခရိုနီကြီးများသာ ယခင်ကလို စားပေါက်ချောင်ပြီးရင်းချောင်နေကြပေလိမ်.မည် ။ လူတစ်စုကထားစရာမရှိအောင်ချမ်းသာကာလူအများစုကစားစရာမရှိအောင်ဆင်းရဲနေကြပေလိမ်.မည်
။ အချို.ကမေးကြသည်မှာ အချို.တသီးပုဂ္ဂလအမတ်များ ၊ တိုင်းရင်းသားပါတီများ ၊ပါတီငယ်ကလေးများမှဝင်ပြိုင်သော အရည်အချင်းရှိသည်. အမတ်လောင်းများကိုလည်းမဲပေးချင်သည် ။ ပါတီကိုကြည်.ပါဆိုသောစကားအရ လူထုလိုလားသောပါတီကြီးတစ်ခုကိုလည်းမဲပေးချင်သည် ၊ဘယ်လိုလုပ်ရမှန်းမသိပါဟု ဒွိဟဖြစ်နေသူများလည်းရှိသည် ။ အဓိကမှာ လွှတ်တော်တွင်းသမ္မတရွေးပွဲတွင် ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများတင်မြှောက်သော သမ္မတလောင်းကို မဲပေးမည်.သူဆိုလျှင် တသီးပုဂ္ဂလအမတ်ကိုလည်းမဲပေးရွေးချယ်နိုင်ပေသည် ။ တသီးပုဂ္ဂလများကလည်း လွှတ်တော်ထဲတွင်သမ္မတရွေးသောအခါ တပ်မတော်မှရွေးသောသမ္မတလောင်းကိုမဲပေးမည်လော ၊
ဒီမိုကရေစီဘက်တော်သားများရွေးချယ်သောသမ္မတလောင်းကိုမဲပေးမည်လောဆိုတာ ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင် ကတည်းကသဲသဲကွဲကွဲ ပြောကြားသင်.ပေသည် ။ ဒီမိုကရေစီလိုလိုနှင်. သာရာဘက်သို. အခွင်.အရေးပေးသဖြင်.ကူးသွားသူ(သာကူးများ)ူမဖြစ်ဖို.အရေးကြီးပေသည် ။ ထိုသို.အာမခံစစ်စစ်ပေးနိုင်ပါက ပြည်သူ.ဘက်ပါသော တသီးပုဂ္ဂလအမတ်များကိုလည်း (ဆန်.ကျင်ဘက်အုပ်စုနှင်.မပေါင်းဘူးဟုစိတ်ချရသည်ဆိုလျှင်)မဲဆန္ဒရှင်များသည် နှစ်သက်သလိုမဲပေးရွေးချယ်နိုင်ကြပါ၏ ။ အဓိကကျသည်ကား ပြည်သူ.ဘက်သား ၃၃၃ ယောက်ကိုယ်.ဘက်မှာရှိဖို.ဖြစ်သည် ။ လွှတ်တော်တွင် အခြားဒီမိုကရေစီနိုင်ငံများမှာလိုအစိတ်သားအရောအနှောအဖွဲ.မရှိတော.သောအခါ ၊ နိုင်ငံ၏သမ္မတကိုပြည်သူလူထုကတိုက်ရိုက်မဲပေးရွေးကောက်ခွင်. ရှိလာသော တစ်နေ.တွင် ရွေကူမေနှင်းတို.ပြောသလို လူကိုပဲကြည်.၍ မဲပေးရမည်.လွှတ်တော်ရွေးကောက်ပွဲများရောက်လာပါဦးမည် ။ လွှတ်တော်သည် လွှတ်တော်အလုပ်ကိုလုပ်နိုင်သောတစ်နေ. ၊ သမ္မတသည်သမ္မတအလုပ်ကိုလုပ်နိုင်သောတစ်နေ. ၊ တပ်မတော်သည် လွှတ်တော်နှင်.အစိုးရအဖွဲ.တွင်ဝင်မပါသောတစ်နေ. ၊တပ်မတော်နှင်.နိုင်ငံရေးပါတီကြီးတခု ရောနှောမနေတော.သောတနေ. တွင် လူကိုကြည်.ရမဲပေးရပေမည်။ ယခုသော်ကား တစ်ခါလာလဲမဲပြာပုဆိုးဟူသောစကားလို ဒီလူတွေပဲ ဘောင်းဘီဝတ်ကာအုပ်ချုပ်လိုက်ကြ ၊ ဘောင်းဘီချွတ်ကာ ပါတီတစ်ခုကိုယ်စားပြု၍ လွှတ်တော်ထဲပြန်ဝင်လာကြ ၊ ဘောင်းဘီချွတ်က ဘောင်းဘီဝတ်ကိုမဲပေးကာ သမ္မတင်မြှောက်လိုက်ကြဟူသော ထူးမခြားနားသံသရာဝဲသြဃမှ လွတ်မြောက်ရာအမှန်ဒီမိုကရေစီမြတ်နိဗ္ဖန်ကိုအကယ်စင်စစ်ရောက်လိုကြပါလျှင် လာမည်.ရွေးကောက်ပွဲ၌ ဘယ်သူဘယ်ဝါ မောင်ဖြူမောင်နီ ၊ ဒေါ်စိမ်း ၊ ဒေါ်ဖြူ အရိုးများသောချေးခါးသောရွေးမနေကြပဲ အရပ်သားအစိုးရဖြစ်လာနိုင်မည်.ပါတီ ကိုသာတံဆိပ်ကြည်.၍ မဲပေးသင်.ပါကြောင်း ။ နှစ်ပြန်ကြော်နှင်. တစ်ပြန်ကြော်ပြိုင်ရဆိုင်ရမည်ဖြစ်၍ တစ်ပြန်ကြော်ဘက်တော်သား ၃၃၃ ယောက်နေပြည်တော်သို.ရောက်ဖို.သာလောလောဆယ်လိုရင်းဖြစ်ပါကြောင်း။ဒီမိုကရေစီဆိုသောအိုးကြီှးမှာလောလောဆယ်
ရွဲ.စောင်းနေပါသေးသဖြင်. ရိုးရိုးအဖုံးနှင်.ဖုံး၍မရ စလောင်းအရွဲ.နှင်.ဖုံးပါမှ အံဝင်ခွင်ကျ Fit Size ကျမည်ဖြစ်ပါကြောင်း ။ လူထက်ပါတီကိုကြည်.ကာဤတစ်ကြိမ်တွင်တော.မဲပေးကြစေလိုကြောင်း တိုင်းပြည်အကျိုးကိုရှေ.ရှုကာရေးသားလိုက်ရပါသတည်း ။ သရ၀ဏ်(ပြည်) စောင်.ကြည်.ဂျာနယ်